गुगलको सामाजिक सन्जाल ‘गुगल प्लस’ मंगलबार बिहानबाट बन्द भएको छ । गुगलले आफ्नो इमेल एप इनबक्स पनि बन्द गरेको छ । प्रयोगकर्तालाई नोटिफिकेसन पठाएर यी विषयमा पूर्वजानकारी दिइएको थियो । फेसबुक र ट्वीटरलाई चुनौती दिने उद्देश्यले सन् २०११ मा गुगल प्लस खोलिएको थियो । यसमा अरु सामाजिक सन्जालमा जस्तै फोटो...
अनुसन्धाताहरुले प्रारम्भिक तथ्याँकहरुको विश्लेषणबाट मोबाइलजस्ता स्मार्ट उपकरणको बढी प्रयोग गर्ने तथा भिडियो खेलमा बढी समय बिताउने बालबच्चाको मस्तिष्कमा “भिन्न संरचना” भेटिएको बताएका छन् । आधुनिक यस्ता उपकरणबाट बाल मस्तिष्कमा पर्ने प्रभावका बारेमा हाल संयुक्तराज्य अमेरिकामा गहन अध्ययन भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य इन्स्टिच्यूट (एनआईएच) को प्रारम्भिक अध्ययनमा दिनमा सात घण्टाभन्दा...
- असार ३०, २०७५, शनिबार, काठमाडौं
हिजोआज अधिकांश व्यक्तिको हातमा मोबाइल हुन्छ, तैपनि मोबाइलको ब्याट्रीका बारेमा भने धेरै मानिस भ्रममा रहेका पाइन्छन् । ब्याट्री चार्ज गरिरहेको समयमा मोबाइल प्रयोग गर्ने कि नगर्ने ? यसलाई कति समयसम्म चार्ज गर्न सकिन्छ ? आदि विषयमा धेरै भ्रम देखिन्छ । स्विच अफ मोबाइल फोनलाई पनि आरामको आवश्यकता हुन्छ, तर धेरैजसो व्यक्तिले मोबाइल फोनलाई कहिल्यै...
- असार १२, २०७५, मंगलबार, काठमाडौं
सोसल नेटवर्किङ साइट फेसबुकले एउटा नयाँ फिचर ल्याउने भएको छ । योर टाइम अन फेसबुक नामक यस फिचरको सहयोगले अब प्रयोगकर्ताले आफुले फेसबुकमा व्यतित गरेको समय थाहा पाउनेछन् । हप्तामा हरेक दिन कति समय फेसबुकमा बिताइयो तथा हरेक दिन फेसबुकमा खर्चिने औसत समय कति छ ? भन्ने जानकारी यस फिचरले...
- चैत्र १४, २०७४, बुधबार, काठमाडौं
अब विदेशबाट ल्याएर दर्ता नगरी प्रयोगमा आएका मोबाइलहरु नेपालमा प्रतिबन्धित हुने भएका छन् । सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका र अनुमति नलिई प्रयोगमा आउने कुनैपनि मोबाइल सेटलाई कालो सूचीमा राख्ने भएको हो । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले नेपालमा आईएमईआई दर्ता नभएका मोबाइल सेटहरुको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने गरि कानून निर्माण गरिरहेको छ ।...
यी हुन् मोबाइलबारे सबैले जान्नै पर्ने तथ्य
- फाल्गुन २७, २०७४, काठमाडौं
आधुनीक आजको दुनियाँमा मोबाइल फोन हरेकको जीवनमा महत्वपूर्ण शरिरलको अंग बनिसकेको छ । तर, मोबाइल फोनबारे कतिपय तथ्य कैयौँलाई थाहा छैन । एजेन्सीको सहयोगमा मोबाइलबारे संकलन गरिएका केही तथ्य यस्ता छन् । मोबाइल फोनबाट सबैभन्दा पहिलो कल मार्टिन कुपरले ३ अप्रिल १९७३ मा गरेका थिए । उनी मोटोरोला कम्पनीका कर्मचारी...
यसरी ह्याक गर्नुहोस वाइफाइको पासवर्ड
- फाल्गुन २२, २०७४, काठमाडौं
कयौं पटक सम्झन खोज्दा पनि वाइफाइको पासवर्ड सम्झिन सकिएन भने केहि विधि अपनाएर सहजै राउटरको पासवर्ड पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो पासवर्ड सामान्य फर्म्याटमा देख्न सकिन्छ जसलाई प्रयोगकर्ताले सहजै पढ्न सक्दछन्। यो पासवर्ड आफ्नो पर्सनल वाइफाई नेटवर्कमा मात्रै काम लाग्दछ। अफिसको नेटवर्क वा अन्य प्रयोगकर्ताको पासवर्ड पत्ता लगाउन यो विधि अपनाउनेः...
फेसबुक म्यासेन्जरबाट येस्तो भाइरस फैलिदैछ ! होसियार हुनुहोस्
- फाल्गुन २२, २०७४, सुनसरी
तपाईं फेसबुक च्याटमा रमाउनुहुन्छ भने सावधान हुनुहोस् है । फेसबुक च्याट म्यासेन्जरमार्फत अहिले भाइरस र मालवेयर फैलिँदैछ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको म्यासेजिङ एप फेसबुक म्यासेन्जर मालवेयरको सिकार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । फेसबुक म्यासेन्जरको माध्यमबाट भाइरसको लिङ्क फैलिरहेको क्यासपरस्की ल्याबले जनाएको हो । ल्याबको रिपोर्टका अनुसार म्यासेन्जरमा भाइरस...
होलीमा टेलिकमको यस्तो छुट
- फाल्गुन १६, २०७४, काठमाडौं
रंगहरुको पर्व होलीको अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई छुट दिने भएको छ । टेलिकमले डाटा प्याक, भोइस प्याक लगायतमा छुट दिने जनाएको छ । टेलिकमले बिहीबारदेखि चैत १ गतेसम्म टेलिफोन शुल्क तथा इन्टरनेट शुल्कमा छुट दिने भएको हो । जिएसएम प्रिपेड प्रयोगकर्ताले ३५ रुपैयाँमा ३ दिनसम्म राति १० बजेदेखि बिहान ६...